Memory of Students' Uprising in June 1988. ၁၉၈၈ ဂျွန်လ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားတဦး ----- (အပိုင်း ၆ - နောက်ဆုံးပိုင်း)
Photo: Moethee Zun & Aung Thu Nyein (ဖင်လန်နိုင်ငံ University of Tampere က Visiting Professor Rauli Virtanen ဖြစ်ပါတယ်။ )
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဇွန်လ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သပိတ် တွင် တထောင့်တနေရာ က ပါဝင်ခဲ့သော ကျနော် မှတ်မိနေသေးသည့် အတွေ့အကြုံ တချို့ ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ ကျော် ကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပေမယ့် လည်း အဲဒီမြင်ကွင်းတွေ ဟာ ပန်းချီကားကြီးတချပ်လို စိတ်ထဲမှာရှိ နေတုန်း၊ အမှတ်တယ ရှိနေတုန်း ပါပဲ။
ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သော သပိတ် တွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသည့် သူများ၏ အတွေ့အကြုံ များ ၊ ရူ့ထောင့်ပေါင်စုံ များလည်း မြောက်များစွာရှိခဲ့ကြ ပါလိမ့်မည်။
အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များ ဖတ်ရှု့လေ့လာ နိုင်ရန် မိမိတို့ မှတ်မိသလောက် ထုတ်ဖော်ရေးသားကြဖို့တိုက်တွန်းပါသည်။ မျှဝေ ကြလိမ့်မည် လို့လည်း မျှော်လင့်မိပါသည်။
မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမှု ၁၉၈၈ ခုနှစ် မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြသည့် ငွေစက္ကူအရေအခင်း၊ မတ်လ ၊ဇွန်လ ကျောင်းသား အရေးအခင်း အဖြစ်အပျက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး လှုပ်ရှားမှု သမိုင်း တွင် အရေးကြီးသည့် သမိုင်း မှတ်တိုင် များ အဖြစ် ဆက်လက် ကျန်ရှိနေပေမည်။
တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သပိတ်များ မှ သည် တတိုင်းပြည်လုံးရှိ ပြည်သူများပါဝင်ခဲ့ကြသည့် ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူလူထု အရေးတော်ပုံကြီး အဖြစ် သို့ အဆင့်ဆင့် တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ခြင်း သည် လွတ်လပ်ရေးခေတ် နောက်ပိုင်း ကြီးမားသော ကျောင်းသားထု တရပ်လုံး၏ အောင်မြင်မှု ရလာဒ်ကြီးတခု ပင်ဖြစ်သည်။ စနစ်ဟောင်း တခု ကို ဖြိုလှဲပြီး စနစ်သစ် တခု သို့ ချီတက် နိုင်စေခဲ့သည်။
လွတ်လပ်ရေးခေတ် တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ၌ သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်နု ကဲ့သို့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်းများ ရှိသည်။ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသပိတ်တွင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဟူ၍ ကား မရှိခဲ့။
တဗိုလ်တက်၊ တဗိုလ်ဆင်း ဖြင့် ကျောင်းသား ၊ကျောင်းသူ အချင်းချင်း အသိအမှတ်ပြု ခေါင်းဆောင်တင်၍သပိတ် တိုက်ပွဲ အသီးသီး ကို ဆက်လက် ဦးဆောင်၍ တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၈၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သပိတ်များ မှ အနာဂတ် လူငယ် ခေါင်းဆောင်များ၊ တော်လှန်ရေးသမား ကောင်းများ ကို လည်း မွေးဖွားပေးခဲ့သည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သပိတ်မှ ကိုမိုးသီးဇွန် ကဲ့သို့သော လူငယ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ အမြောက်အများလည်း ပေါ်ထွက် လာခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဇွန်လ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သပိတ်သည် ကျောင်းသားထု တရပ်လုံး က ပါဝင် ထုဆစ် ရေးသားခဲ့ကြ သည့် သမိုင်းကြီးဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး လှုပ်ရှားမှု သမိုင်း ၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် သပိတ် သမိုင်းများ တွင် အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူများ ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်သားကျောင်းသူများ ၏ အဘိုးမဖြတ်နိုင်သော Value ( တန်ဘိုး) တွေရှိကြသည်။ ဘ၀ပေါင်းများစွာ၊ အသက်ပေါင်းများစွာ ၊ မိသားစုပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်မှုတွေ ရှိခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာ များ စွာ ရှိကြသည်။ နာကြဉ်မှုတွေ ရှိကြသည်။ ခံစားမှုတွေရှိကြသည်။
ရိုးသားဖြောင့်မတ်စွာဖြင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရလျှင် ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံကြီး ကို စစ်အာဏာရှင် အဆက် ဆက် က ကော၊ လက်ရှိ အာဏာရ ပါတီ NLD ခေါင်းဆောင်များ က ကော ယခုချိန်ထိ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ ခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ တန်ဘိုးထားခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိုးကွယ်နေမှုကြောင့် အင်မတန်မှ မွန်မြတ်လှသည့် သမိုင်းများ ကို အသိအမှတ်မပြုခြင်း၊ လစ်လျှူပြုနေခြင်း သည် လူ့အသက်သွေးပေါင်းစုံပေးဆပ်ခဲ့ကြသည့် သမိုင်းကို ဖောက်ပြန်မှု ပြုနေကြခြင်းသာဖြစ်သည်။
ဖောက်ပြန်နေယုံမက အဆိုးဆုံးမှာ ပြည်သူလူထု ကို ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြသည့် စစ်အာဏာရှင်ဟောင်းများ ကို အရှက်တရားကင်းမဲ့စွာ ဖင်ပူးထောင်း ထောင်၍ ရှစ်ခိုး ကန်တော့ နေကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သမိုင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများ မှာ လက်ရှိ အသက် ၅၀ ကျော် ၊ ၆၀ ကျော် ပိုင်းသို့ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ သွေများ နဲ့ ရေးသားခဲ့ သော မော်ကွန်း တွေပါ။ သူတို့ သည် သက်ရှိထင်ရှားစွာ ရှိနေပါသေးသည်။
ထိုသို့ သမိုင်း မှတ်တိုင် များ ကို ဖောက်ပြန်နေခြင်း၊ ဖျက်ဆီးပစ်ခြင်း၊ မသိဟန်ဆောင်ပြီး အသိအမှတ် မပြုခြင်းသည် အာဏာရှင် စိတ်ဓာတ်ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းနေကြခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။
ပြည်သူထူထု က တ လျောက်လုံးတောင်းဆိုခဲ့ကြသည် မှာ စစ်အာဏာရှင် ဖြုတ်ချ ရေး၊ တရားမျှတမှု ရရှိရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ တရပ်ပေါ်ထွန်းရေး ပင်ဖြစ်သည်။
အခုထက်ထိ ဘာတခုမှမရသေးတဲ့အပြင် လက်ရှိ အာဏာရအစိုးရသည် စစ်အာဏာရှင်များ ကို အကာအကွယ်ပေး အသိအမှတ်ပြုပေးနေရ သည်။ အာဏရှင်စနစ်ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းနေကြသည်။ ထိုသူတို့ သည် သမိုင်းတွင် ဖောက်ပြန်သူများ ၊ တော်လှန်ရေး ဖောက်ပြန်သူများ အဖြစ် အနာဂတ်တွင် ဖော်ပြခြင်းခံရပေလိမ့်မည် မှာ မလွှဲပေ။
ဇွန်လ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သပိတ် ၃၂ နှစ် မြောက် တွင် အသိအမှတ် ပြုသင့်ခံရသူများကို ထုတ်ဖော် ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြင့် သမိုင်းတွင် တထောင့်တနေရာ က နေ အတူပါဝင်ခဲ့ကြသည့် မ်ိတ်ဆွေ၊ ရဲဘော် သူငယ်ချင်းများအားလုံး ကို လွမ်းမော သတိယစွာဖြင့် ဂုဏ်ပြု လိုက်ပါသည်။
မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအားလုံး လည်း လွမ်းမော ဂုဏ်ယူနေကြလိမ့် မည်ဟု ထင်မြင်မိပါသည်။
မြတ်စိုး- ဇွန် ၂၇, ၂၀၂၀။
ဓာတုဗေဒ နောက်ဆုံးနှစ်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ပင်မ -၁၉၈၈)
Memory of Students' Uprising in June 1988. ၁၉၈၈ ဂျွန်လ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားတဦး ----- အပိုင်း (၅ )